शरिरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला कहिल्यै न’छोड्नु ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/शरिरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला कहिल्यै न’छोड्नु !
काठमाडौं- ज्योतिष शास्त्रको अनुसार महिलाको शरीरको कुनै पनि भाग ठू’लो छ भने त्यसले धेरै कुरा संकेत गरिरहेको हुन्छ। शास्त्रमा कुन-कुन अंग ठूलो भएका महिलाहरु भा’ग्यमानी हुन्छन भन्ने विषयमा उल्लेख छ। शा’स्त्रअनुसार शरिरका यी अं’ग ठुला हुने महिला भा’ग्यमानि हुने र बिवाहका लागि राम्रो हुने मान्यता छ ।तसर्थ पुरूषले यस्ता युवती जी’वनसाथीको रूपमा स्विकार्न गर्न अर्थात न’छोड्न् ज्योतिषहरू सु’झाव दिने गर्छन् – हात:दुईवटै हात लामो भएका महिलाहरुलाई जीवनमा ठूलो सु’खशान्ती आ’राम मिल्नुको साथै असल जीवनसाथी मि’ल्ने गर्छ।
कपाल:लामो कपाल भएका महिलाहरुले जीवनमा ठूलो स’फलता हँ’सिल गर्ने र परिवारलाई सु’खी र खु’शी राख्न सक्छन। घाँटी: लामो घाँ’टी भएका महिलाहरु मे’हेनती र आ’र्थिक रुपले सम्पन्न हुने गर्छन। यी महिलाहरुलाई समाजमा नि’कै मा’न-प्रतिष्ठा समेत पाउने अ’वसर मिल्ने छ। कान: श’रिरका दुई वटै कान ठूलो भएका महिलाहरु ला’मो आ’युको हुने र नि’कै भा’ग्यमानी हुने शा’स्त्रमा उल्लेख छ ।
खुट्टा:लामो खुट्टा भएका महिलाहरु धेरै भा’ग्यमानी हुने र जीवनमा प्र’शस्त धन ला’भ गर्न सक्ने। ना’ईटो: ठू’लो वा ग’हिरो ना’ईटो भएका महिलाहरुले पनि जीवनमा अ’त्यधिक धन ला’भ गर्ने र जीवनमा ठू’लो स’फलता हँ’सिल गर्न सक्छन ।